Wafdi uu hogaaminayo madaxwaynaha Maamulka Galmudug oo Cadaado gaaray iyo kulamo halkaasi Ka Socda “Sawirro” – Radio Muqdisho
Wafdigan oo uu higaaminayay madaxwaynaha maamul goboleedka Gal-mudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ee maanta soo gaaray magaalada Cadaado oo ay qayb ka ahaayeen golayaasha kale duwan ee Gal-mudug iyo nabadoono ayaa waxaa xarunta madaxtooyada ku soo dhaweeyay madax ka tirsan maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb iyo ururada bulshada qaarkood.
Afhayeenka Baarlamaanka Ximan iyo Xeeb C/llaahi Faarax Sandheer oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in Ximan iyo Xeeb iyo Gal-mudug ay Afartii bilood ee la soo dhaafay ay si dhow uga wada shaqaynayeen qabsoomidda shirka gobolada dhexe.
Soo dhaweynta ka dib kulan balaaran oo ay ka wada qayb galeen madaxda Gal-mudug, Ximan iyo Xeeb, Salaadiin ka kala socotay magaalooyinka Cabudwaaq, Gaalkacyo iyo Cadaado ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda Bartamaha Soomaaliya, kaas oo looga hadlayay sidii loo fududayn lahaa qabsoomidda shirka gobolada dhexe.
Sudlaanka guud ee beelaha Gal-mudug C/naasir Jaamac Seed oo kulanka ka hadlay ayaa Ximan iyo Xeeb kaga mahadceliyay martigalinta shirka Mudug iyo Gal-gaduud ay maamulka ku samaysanayaan, waxaana uu sheegay in Gal-mudug uu u sharaxanyahay Mudane Cabdi Xasan Cawaale.
Waxgaradka kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in la joogo waqtgii la midoobi lahaa, waxaana ka soo qayb galayaashu ay taageero u muujiyeen madaxwaynaha Gal-mudug oo musharax u ah madaxtinimada Mudug iyo Gal-gaduud.
Magalaada Cadaado oo xarun u ah Ximan iyo Xeeb ayaa lagu wadaa dhawaan inuu ka furmo shirka Mudug iyo Gal-gaduud, waxaana xilligan ku sugan wafdiyada shirka ka qayb galaya qaarkood.